Ny fotoana fialan-tsasatra dia feno fihodinana ary angonina ireo valizy. Nefa tokony ho tsaroana fa ankoatra ny fandroana fialan-tsasatra ho an'ny fitsaharana, mila mitondra anao akanjo akanjo manga sy tsara tarehy. Indrindra fa ny safidiny tamin'ity vanim-potoana ity dia lehibe loatra ka tsy maintsy farafaharatsiny vitsivitsy.
Ny akanjo ho an'ny tora-pasika dia tokony ho maimaim-poana, mahazatra ary vita amin'ny fitaovana maivana: chiffon, cambric, kotonga, lamba rongony, kiraro, silk. Tena tsara raha tsy mila iresahana ilay fitaovana.
Ny fomba fitafy akanjo amin'ny fahavaratra
Noho ny ezaka nataon'ny mpanamboatra lamaody, anisan'ireo modely amin'ny akanjo ireo zazavavy dia afaka mifidy ny habe sy ny safidy mety.
Misy marobe be mpitia ity fahavaratra ity:
Dress-up hoodie. Manana tapakila avo tsy misy saribakoly izy io, manangona tohatra sy tetezana eo amin'ny tsipika tapatapaka. Mety amin'ny ankizivavy rehetra.
Manaova akanjo ho an'ny tora-pasika. Izy ireo dia tena tsara ho an'ny fialantsasatry ny fialan-tsasatra: hazavana, lozabe ary tsy manakana ny hetsika. Matetika dia manana faka lalina sy manapaka amin'ny lafiny. Ity akanjo ity dia mifanaraka tanteraka amin'ny kiraro.
Akanjo-pareo ho an'ny tora-pasika. Antsoina hoe Sarong koa izy io. Ity akanjo ity dia sombin-javatra izay ahafahanao mamoritra ny tenanao sy ny rindrina tsara tarehy eo amin'ny tendanao. Ny tora-pasika dress-pareo dia mety ho akanjom-bolo miaraka amin'ny takelaka sy ny fandroana tany am-boalohany. Amin'izany fotoana izany dia maivana sy manjelatra ny hafanana tsy hanelingelina anao.
Akanjo-akanjo ho an'ny tora-pasika. Akanjo lava izy io, izay tsy misy afa-tsy làlan-kizavona kely eo anelanelan'ny volo lava sy ny fofona.
Dress-shirt. Izany dia akanjo lava mamirapiratra manamaivana ny endrik'ilay sary. Ara-dalàna ny ankizivavy manana vatana tsara.
Dress-shirt. Io safidy io dia mihatra amin'ny akanjo fatoriana ho feno. Ny endriny dia afaka manafina ny vola fanampiny ary manantitrantitra ny nono. Ny singa manan-danja amin'io akanjo io - mamelatra ny tendany.
Dress-kianja. Andininy hafa amin'ny akanjo amin'ny moron-dranomasina ho feno. Tena malalaka sy mora ary malemy saina izy io.
Akanjo sy akanjo vita amin'ny akanjo. Amin'ny andian-tantely miaraka amin'ny akanjo miloko marevaka toy izany dia tsy hitovy ny akanjo, ary tsy hijanona raha tsy eo ny lahy.
Miakanjo miaraka amin'ny tarika elastic. Amin'izao vanim-potoana izao, ny akanjo tsy misy akanjo dia eo amin'ny tampon'ny laza, ka afaka mividy an'io safidy io eny amoron-dranomasina mora, avy amin'ny fanazavana fotsiny. Na dia toy ny akanjo marevaka tsotra aza dia mahafinaritra satria afaka mandany tsy misy bandy ianao.
Ny akanjom-boninahitra an-dranomasina amin'ny torapasika: fohy na lava?
Tsy isalasalana, modely fohy foana ny taloha ary ho foana. Ampifanarahan 'izy ireo amim-pandeferana, amim-pangorahana sy amim-pahamendrehana. Ary amin'ity vanim-potoana ity, ireo mpahaikanto dia naneho ary tsy dia mahaliana loatra ny akanjo lava ho an'ny tora-pasika. Tsy isalasalana, ny akanjo toy izany, ankoatra ny fiarovana ny hoditra amin'ny vokatry ny tara-pahazavana, dia manamafy tsara koa ny hatsarana sy ny firaisana amin'ny vatanao. Ny akanjo fohy lava dia mihamitombo hatrany hatrany. Noho izany, aoka ho azo antoka ny hividy modely toy izany.
Color et décor
Ity lohataona ity dia manosika loko fotsy rehetra. Noho izany, ny akanjo fotsy fotsy dia tsy vitan'ny hoe mampiavaka anao fotsiny, fa koa manantitrantitra tsara ny fotoana misy anao. Tsy dia malaza loatra ny manga, manga, tiroza, maitso, mavo ary volamena.
Ny akanjo fotsy fotsy ihany koa dia azo amboarina amin'ny endriny fanampiny toy ny vatofantsika na kodiarana fanoratana, dika mitovy. Etsy ankilany, amin'ity vanim-potoana ity indray dia ao anaty tanimbolin'ny fananganana sy fakana an-keriny. Noho izany, afaka misafidy tsara ny akanjo amin'ny lamba mainty na manga, paiso na kely. Ankoatra izany, mihainoa tsara ny akanjo miloko mofomamy na sary marika.
Ankoatra izany, ny akanjo fatoriana dia voaravaka amin'ny ravin-damosina, ny flounces ary ny ruches.
Akanjo fitondra amin'ny fahavaratra
Sarafana amin'ny fahavaratra
Fanatanjahantena ara-panatanjahan-tena - ahoana no fomba hifidianana modely?
Fiakanjo hariva ho an'ny vehivavy 50 taona
Ny akanjo fotsy - ireo modely tena marefo amin'ny hoditra voajanahary sy artifisialy
Angelina Jolie nanenina fa very nandritra ny 14 taona izy
Fambolena kôkômbra amin'ny varavarankely amin'ny ririnina
Jennifer Lopez dia namaritra ny fomba nisafidianany lehilahy ho an'ny tantara
Ny antony 24 tsy tokony hamela irery ny zanany mandritra ny fotoana maharitra fotsiny amin'ny papa
Ny Grail Masina - inona ary aiza no misy azy?
Angelina Jolie ao anatin'ny toe-javatra sarotra?
Jereo miaraka amin'ny sarin'ny tenanao
Inona no atao hoe triphobobia - ahoana no ahafahana manalavitra ny tahotra ny lavaka fitaratra?
Arabia Saodita - fizahan-tany
Gout - fitsaboana
Inona no atahoran'ny olona tsy mahazatra azy?
Maty ny vadin'i Celine Dion
Ash tennis eny amin'ny lampihazo
Black tourmaline - toetra mahagaga
Sakafo ho an'ny salady ho an'ny Taombaovao
Dibuk - iza io ary raha misy dibuk?
Fanomezana ho an'ny rafozany ho an'ny Taombaovao